ဘိုးအင်း 747-400 JAL Cargo FS2004 DOWNLOAD - Rikoooo
အရွယ် 39 ကို MB
downloads ရယူရန္ 17 178
Author: မော်ဒယ်က de စီမံကိန်း Opensky ...
ဒီနေရာမှာဓာတ်ပုံ-လက်တွေ့ကျကျဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်အတူတစ် 747 Cargo ဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအနီးကပ်အစစ်အမှန်တယောက်အားနဲ့ဆင်တူအလွန်လှပသောဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ panel ကိုနှင့်အသံများကိုအလွန်အောင်မြင်သောဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာကျနော်တို့အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲအဖြစ်ရှာတှေ့နိုငျသောအကောင်းဆုံးတစ်ဦးစုစည်းပါ! မလွဲစေနဲ့ !
ဂျပန်လေကြောင်းလိုင်း International Co. , Ltd မှ .. (JAL) IATA: JL ICAO: JAL) ဂျပန်များ၏အမျိုးသားရေးလေကြောင်းလိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာလေဆိပ်နာရီတာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ (NRT), တိုကျိုမြို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် Haneda (HND), Chūbuအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် (အန်ဂျီအို) နှင့် Kansai အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် (KIX) မှာ၎င်း၏အများအပြားအချက်အချာမှလေးတိုက်ကြီးအပေါ်ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာလေကြောင်းခရီးစဉ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။
JALways, J-Air လေကြောင်းလိုင်း, ဟော့ကိုင်းဒိုး Air လေကြောင်းလိုင်းစနစ်, JAL Express ကို, ဂျပန်လေတပ်ခရီးသွားလက်မှတ်, ဂျပန် Transocean Air နှင့်ရူကျူး Air ကိုခရီးသွားလက်မှတ်: ဒါဟာအောက်ပါအတိုင်းလည်းခုနစျပါးအခြားကုမ္ပဏီများပါဝင်သောဂျပန်လေကြောင်းလိုင်းကော်ပိုရေးရှင်း, 2004 ကတည်းကကြောင်းအမည်, ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ သူမသည် Oneworld ၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ (အရင်းအမြစ်ဝီကီပီးဒီးယား)